राजदूतहरु घर फर्कँदैं, जागिर खाने बाहेक अर्को उपलब्धि के त ? - Nepal Readers
राजदूतहरु घर फर्कँदैं, जागिर खाने बाहेक अर्को उपलब्धि के त ?
बरु यहि संकटको घडीमाझ पनि ओमानस्थित राजदूत शर्मिला ढकाल पराजुलीको भने केहि काम देखिएको छ । उनले मस्कटमा नेपाली दूतावास भवन बनाउनका लागि जमिनको प्रबन्ध गराएकी छिन् । सरकारले कूटनीतिक तहमा आफ्नै जमिनघर खरिद गर्नका लागि हरेक दुतावासलाई हरेक बर्ष केहि बजेट र आवश्यक निर्देशन दिंदै आएको छ । तर, २ बर्षअघि झण्डै १ अर्व रुपैंयामा अमेरिकाको डीसीमा राजदूत निवास किनिएको र योपटक ओमानमा जग्गा किनिएको बाहेक अरु चलअचल सम्पत्ति कूटनीतिक नियोगमार्फत जोडिएको सूचना बाहिर आएको छैन । – नेपाल प्लसबाट साभार ।